I-Casa la Chora Apartment 3 - I-Airbnb
I-Casa la Chora Apartment 3
Igumbi elise- indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguElena
Iiflethi okanye izindlu zethu ezikwicomplex zikumbindi weSámara, uhamba nje imizuzu eyi-3 ukusuka elunxwemeni kunye nomgama wokuya kwivenkile yokutya, iibhanki, iivenkile zokutyela zasekuhlaleni, iibhari kunye namayeza. Izindlu zethu ezinendawo yokuphola eziyi-2 zineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinegumbi lokuhlambela, amanzi ashushu, ikhitshi elinento yonke, ityeya enkulu nepuli entle esetyenziswa nangabanye abantu!
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ngabantu abayi-2. ($ 15 umntu ngamnye owongezelelekileyo)
Igumbi lokulala elinebhedi enkulu nesofa kwigumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela eliyi-1, ikhitshi elitofotofo, ithala lokuphumla. Itafile nezitulo kwigumbi lokuhlala lesidlo sakusasa netafile kwindawo yokutyela isidlo sasemini nesangokuhlwa. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu nesilingi ukuze kuqinisekiswe ukuba upholile emini nasebusuku. Iflethi ikhanya kakhulu, ineefestile ezininzi. I-intanethi iyafumaneka, i-TV, indawo yokupaka ekhuselekileyo neyabucala.. ekugqibeleni, ipuli yokuqubha entle eneJacuzzi, enezibane ezinemibala ukuze kubekho umoya ofudumeleyo nopholileyo ngokuhlwa!
IN THE PROPERTY IS NOT ALLOWED TO INVITE PEOPLE FROM THE OUTSIDE, PARTIES AND EVENTS ARE NOT PERMITTED FOR THE TRANQUILITY AND SAFETY OF ALL THE GUESTS
Ukuba uhlala iintsuku ezimbalwa okanye iveki eyi-1, kuquka ukucoca yonke imihla, ukuba ukuhlala kwakho kudlula iveki inkonzo yokucoca izihlandlo eziyi-2 ngeveki.
Ukucoca yonke imihla okanye ngeveki akuquki ukuhlamba izitya zasekhitshini, iikomityi, iipleyiti, iimbiza okanye iipani. Iquka kuphela ukubulala iintsholongwane kwifenitshala yasekhitshini.
Unokucela inkonzo eyongezelelweyo yokubhatala.
Iiflethi okanye izindlu zethu ezikwicomplex zikumbindi weSámara, uhamba nje imizuzu eyi-3 ukusuka elunxwemeni kunye nomgama wokuya kwivenkile yokutya, iibhanki, iivenkile zokutyela zasekuhlaleni, iibhari kunye namayeza. Izindlu zethu ezinendawo yokuphola eziyi-2 zineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinegumbi lokuhlambela, amanzi ashushu, ikhitshi elinento yonke, ityeya enkulu nepuli entle esetyenziswa nangabanye…
4.89 (iingxelo zokuhlola 137)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sámara Beach